Umhlambi wama-Cape Parrot.
Umsebenzi we-South African Research (i-SARChI) Chair in Ecosystem health and biodiversity in KwaZulu-Natal and the Eastern Cape uSolwazi Colleen Downs uyisibonelo esihle somkhankaso wokuvikela uhlobo lukapholi olutholakala eNingizimu Afrika kuphela i-Cape Parrot (i-Poicephalus robustus).
U-Downs unguSihlalo we-Cape Parrot Working Group (i-CPWG), eyasungulwa inyuvesi isabizwa nge-University of Natal ngowe-1998, ekhuthaza ukuvikelwa kukapholi i-Cape Parrot. Ngowezi-2019, i-BirdLife South Africa iqoke i-CPWG ne-Cape Parrot Project (i-CPP) yase-Wild Bird Trust’s e-Hogsback ngohlobo oluzovikela i-Cape Parrot.
Umsebenzi we-CPWG nowe-CPP usanda kudingidwa kwiwebhina ebihlelwe yi-BirdLife South Africa, lapho uDkt Kate Carstens wase-CPP ebebambisene no-Downs emkhankasweni wokuvikela opholi okubalwa kukhona ukulungisa izindawo zabo, ukusungulwa kwezinhlelo zomphakathi nokwenza imisebenzi yocwaningo emqoka.
U-Downs no-Castern, bobabili abangosihlalo be-Cape Parrot neMistbelt Forest Conservation Action Plan, bakhulume ngezindawo zopholi, ukudla kwabo, ukuchamisela, ukwenza kwabo nezingozi ezinkulu ababhekana nazo, babalula impumelelo yemikhankaso yokuvikela lezizinyoni nezindawo ezihlala kuzona.
I-Cape Parrot ibalwa nezinhlobo zezilwane ezisengcupheni yokushabalala ngenxa yezindawo zokuhlala nokushoda njengoba ithembele emahlathini i-Afromontane Yellowwood ukuthola ukudla nezidleke. Ama-4% eNingizimu Afrika kuphela ayihlathi lemvelo. Angaphansi kwezi-1 600 ama-Cape Parrot asele endle. Nawo asengcupheni yokuzingelwa, ukubanjwa nezifo.
I-CPWG isikwaze ukuhlela i-Cape Parrot Big Birding Day iminyaka engaphezu kwengama-20 ukubheka ukuthi zingaki lezizinyoni nendlela eziphila ngayo, yakwazi ukukhiqiza ucwaningo lwe-classification of the bird as its own species, kanti ithole usizo kwa-Woolworths ekwenziweni kwezikhwama zokuthenga ukuxhasa lomkhankaso.
Into emqoka emsebenzini wabacwaningi base-CPWG nase-CPP wukubona nokuvikela izindawo ezimqoka nezokugcinwa kwemvelo, phecelezi ama-Important Bird and Biodiversity Areas (ama-IBA) eLimpopo, KwaZulu-Natal naseMpumalanga Kapa njengoba ukuvikela amahlathi kumqoka ekuvikeleni loluhlobo lopholi.
‘I-Cape Parrot singayithatha njengohlobo lwekhethelo lwalolu hlobo lamahlathi,’ kusho u-Downs, ngamanye alamahlathi amancane nanqabile.
I-CPP ihlose ukuvikela amahlathi angamahekthare ayishumi eZintabeni zaseMathole ngokutshala imbewu engama-3 000 minyaka yonke evela emisebenzini yomphakathi yalenhlangano. Basembhidlangweni wokuthola ulwazi olushodayo ngokwenza ucwaningo ngezindawo zezidleke, izinhlobo nempilo, nokubheka iziqeshana ezimqoka zamahlathi nokubona ukuthi i-Cape Parrot iyaphumelela yini ukudla izilwane engazijwayele ngokubheka ukudla kwayo.
Isithombe: ngu-Colleen Downs